Aluminium chinaum Aluminium ilaa uu ka soobaxayo Wejiga Daaqadda Ares83 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Aluminiumka hoos u dhacaya ee hoos u dhacaya-Ares83 waa mid shaqeynaya oo waara. Nooca ugu dambeeya ee dayactirka hoose ee daaqada sababa la xiriira qaybo yar oo guuraya, daaqada aluminiumka muraayadda u ah ayaa ah naqshad caadi ah oo ku habboon qaababka naqshadaha badankood. Shaashaddu waxay ku sii jeedaan roondooyin isku habeyn ah oo la isku habeyn karo oo la raacayo jidka aluminiumka ah, iyagoo bixinaya furitaan siman iyo xiritaanka.
Aluminium kor usii qaadanaya daaqadda-Ares83
Aluminium ilaa daaqada kalabaxa
5mm + 9A + 5mm & hal galaas
Waxaa jira astaan ​​waddo oo lagu socdo si looga fogaado biyaha iyo boodhka Aluminium ilaa daaqadda hooseysa
Aluminiumka hoos u dhacaya ee hoos u dhacaya-Ares83 waa mid shaqeynaya oo waara. Nooca ugu dambeeya ee dayactirka hoose ee daaqada sababa la xiriira qaybo yar oo guuraya, daaqada aluminiumka muraayadda u ah ayaa ah naqshad caadi ah oo ku habboon qaababka naqshadaha badankood. Shaashaddu waxay ku sii jeedaan roondooyin isku habeyn ah oo la isku habeyn karo oo la raacayo jidka aluminiumka ah, iyagoo bixinaya furitaan siman iyo xiritaanka. Cimilada si buuxda ayaa loo xidhay shaxda si loo yareeyo dillaacyada, boodhka iyo biyo-gelinta, aluminiumka hoos u sii dhacaya ayaa dariishadda muuqaalka u jaraya silsiladaha awoodda daaqadda. Waxay ku habboon tahay meelaha ay xaddidan tahay, alumiiniyada kor u kaca daaqadda hoose waxay noqon kartaa bayaanka qaabeynta ee dharka dhaqda, musqulaha iyo jikada.
Aluminiinka Finzone ee daaqadda hooseeya ayaa ah natiijada soo-saarka badeecada muddada dheer iyo waayo-aragnimada isticmaale ee muddo dheer ah. Thanks to in ka badan hal milyan oo macaamiil ah oo ku qanacsan oo ka kala yimid in ka badan 40 waddan, Finzone wuxuu noqday mid ka mid ah aluminiumka ugu caansan ee hoos u dhacaya daaqadaha kalabaarka adduunka oo dhan. Tayada aan xadidanayn iyo horumarka soosaarka ee sii socda ayaa runtii lacagtii laga baxay. Aluminiinka Finzone ee ka soo baxa daaqadda is jiidashada ayaa lagu gartaa naqshad xarrago leh, cimri dherer iyo saaxiibtinimo adeegsade.
Khibraddu waxay la mid tahay tayada oo macquul ah qiimo macquul ah. Aluminium Finzone ah oo daaqadda hoose ka muuqda ayaa leh in ka badan hal milyan oo macaamiil ku qanacsan oo ka socda 40 waddan iyo khibrad 20 sano ah. Aluminium Finzone ah oo ka soo dhacaya daaqada kalabaxa ayaa daryeela tallaabo kasta oo howsha ah, oo ay ku taageerayaan aqoonta iyo waaya-aragnimada ka soo baxday labaatan sano ee cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka.
Hore: Suuqa Qiimaha jaban ee Ares80
Xiga: Aluminium Vertical Suuqa Dhaqaajidaha Ares85
Daaqada Aluminiinka Ares80